Ambulance နဲ့ အသိစိတ်လေးရှိစေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Ambulance နဲ့ အသိစိတ်လေးရှိစေချင်
Ambulance နဲ့ အသိစိတ်လေးရှိစေချင်
Posted by padonmar on Feb 8, 2011 in Community & Society | 12 comments
ကျွနိမနေတဲ့နေရာက အထူးကုဆေးရုံတွေနဲ့ နီးတော့ ambulance တွေ အမြဲတွေ့နေရပါတယ်၊မနက်ရုံးတက်ချိန် နဲ့ ညနေရုံးဆင်းချိန်တွေမှာ မီးပွိုင့်ကားကျပ်နေရင် ambulance့ ကလည်းsiren မြည်နေပါရက်နဲ့ ဘယ်ကားမှလမ်းဖယ်မပေးကြပါဘူး၊
ကားထဲမှာအရေးကြီးလူနာပါရင်လဲပါနေမယ်၊လူနာကို ဆေးရုံခေါ်ဖို့ သွားတာလဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊
သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ Ambulance အသံကြားတာနဲ့ ကားအားလုံးလမ်း တစ်ဖက်ကပ်ပေးကြတာ တွေ့ဖူးပါတယ်၊
ambulance ၊မီးသတ်ကားတွေဟာ လမ်းပြောငိးပြန်တောင် မောင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်၊
ambulance ထဲမှာပါတဲ့ လူနာဟာ ကိုယ့်ဆွေမျိူးဆိုရင် လမ်းဖယ်မပေးတဲ့ ကားပိုင်ရှင်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊ကိုယ်နဲ့လက်လှမ်းမီသူတွေကို အသိပညာပေးပေးကြစေလိုပါတယ်၊
အခြေအနေကိုတော့ မျက်စိထဲ မမြင်ပေမဲ့ တခါတရံ ဖယ်ပေးလို့ မရလောက်အောင် ကားကျပ်နေတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာက လိုင်းကား အကြီးကြီးတွေက လမ်းပိတ်မောင်းတယ် လမ်းတွေက ကျပ်တယ် သီးသန့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လိုင်း ဆိုတာ မရှိဘူး။ ကားတွေ ကိုးလိုးကန့်လန့် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်အခါ ဆိုရင် တော်ယုံ ရှင်းဖို့ မလွယ်တတ်ဘူး။
လူအသက် ကို လက်လွတ်စပါယ် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေမဲ့ လူတွေလို့တော့ မထင်ပါဘူး။
ကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်း လူနာ တင်ယာဉ်တွေဆီ အသံတွေ ကြားရင် လူ အသက်တချောင်း အရေးပေါ် ဆိုတာ သိကြမှာပါ။
ဒါက ဖြစ်နေကျ တွေ့နေကြတွေပါ။ ကျွန်တော် တစ်ခါ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါက ဘယ်သူ့ဘက်မှ လိုက်ပြီး မပြောပါဘူး။ တစ်ချို့ လူနာတင်ယာဉ်မောင်းတွေကလည်း သူတို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် တစ်ဆုံး နှိုက်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လူနာတွေဘက်က နစ်နာတာတွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြေအနေတစ်ခု အပေါ်မှာလည်း ကွားပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဟာကွက်တွေက လိုက်ပြီး မရေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
အခု မောင်ရွှေလာပြီဆိုရင်လဲ ရှစ်မိုင်မှာလမ်းတွေကိုပိတ်လို့ အမြီးတောင်မမြင်ရသေးဘူး လမ်းကကြိုပိတ်ထားတာ ကားတွေကဟိုကပတ်မောင်း ဒီကပတ်မောင်းနဲ့အဲဒီနေ့ရုံးနောက်ကျတဲ့နေ့ပဲ
မီးသတ်ကား၊လူနာတင်ယာဉ်၊ ရဲကား စတဲ့ ယာဉ်တွေအတွက် အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ မောင်းနိုင်တဲ့ သီးသန့်ယာဉ်ကြော တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်မောင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ လမ်းမကြီးတွေမှာ ညာဘက်အစွန်ဆုံး လမ်းကြော ကို သီးသန့်ယာဉ်ကြောအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပေးပါတယ်။
အရေးပေါ်ယာဉ်ကြောပေါ်မှာ မောင်းနှင်မိရင် ဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။
ဥသြသံကြားလို့ ဘယ်ဘက်မကပ်ပေးရင် ဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။လိုင်စင်ကို ဆိုင်းငံ့လုပ်ပါတယ်။
I agree with Mr. Spectacles. In fact, the problem is system error.
မီးသတ်ကားက VIP ထဲမှာ မပါဘူးဗျ… လူကြီးကားကမှ တကယ့် VIP အစစ်… အကောင်ကြီးရင် ကြီးသလို အမြီးရှည်တယ်… ကြိုတင်ပြီး လမ်းပိတ်ထားတတ်တယ်…
အမောင်းလိုင်စင် ဖြေရင် ပါတယ်လို့ သိရတယ် .. ဒါပေမယ့် အခု မောင်းနေတဲ့လူတွေ ဂရုမစိုက်တာက
(၁) ကားလမ်း ကြပ်နေလို့လား
(၂) ၀မ်းရေးကို အာရုံစိုက်နေရလို့လား
(၃) ဂရုစိုက်စရာ မလိုလောက်အောင် ကြီးမားနေလို့လား
(၄) ဂရုမစိုက်ခဲ့ရင် အရေးယူမယ့်လူ မရှိလို့လား
(၅) တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြားဖူးတာက လူနာတင်ယာဉ်တွေ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ဥသြ မဆွဲရဘူးလို့ သိရတယ် .. vip လောက်ပဲ .. မီးသတ်လောက်ပဲ ဥသြဆွဲရတယ် .. ဆိုတာပဲ ..
နောက်ပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲ ဆိုတာတွေလဲ ကြည့်ဦးလေ သူတို့ခမျာမှာ
(၁) ဒဏ်ငွေရိုက်ဖို့ သားကောင်ကိုလဲ ရှာရ
(၂) ပုံမှန် ရနေတဲ့ ကားတွေဆီကလဲ ဆက်ကြေးတွေ ကောက်ရ
(၃) လူကြီးလမ်းကြောင်းလို့ ပြောတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေလဲ ရှင်းနေအောင် လုပ်ရ
(၄) မှား မဖမ်းမိအောင်လို့ သတ်မှတ် နံပါတ်တွေလဲ အမြဲ ရွတ်ဖတ်သရဇယ်နေရ
(၅) ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ ဆိုက်ကား၊ စက်ဘီးတွေကိုလဲ ဖမ်းပေးနေရ
ဒါကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ လူနာတင်ယာဉ်ကို လမ်းရှင်းအောင် လုပ်ပေးရမယ်လို့ သိထားတဲ့ စည်းကမ်းကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်နေတော့ ကျန်တဲ့လူတွေ အေးဆေး ..
အသိစိတ်လေးရှိစေချင် ပါလို့ ရေးလိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ post လဲ မတင်တတ် လို့ပါ။ ကြုံခဲ့ရတာက စိတ်ကကောင်းစရာမို့ ရင်ဖွင့်တာပါ။ post တင်ပေးနိုင်ရင်လဲ တင်ပေးပါ။ point လိုချင်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ၆-၂-၁၁ က ကျမအဖေရဲ့မွေးနေ့မို့ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ပိုက်ဆံသွားလှူပါတယ်။ ရှေးပင်စင်စားမို့ ၅၀၀၀၀ လှူတာ ဘယ်နဲမလဲနော်။ ဒါတောင် သားသမီးတွေ ကန်တော့တာ ကို ဖယ်ထားပြီး လှူရတာ။ စိတ်ကတော့ အဓိကပေါ့လေ။
ရွှေတိဂုံတောင်ဖက်မုဒ်က ဂေါပကလူကြီးဆိုတဲ့ အရွယ်သိပ်မကြီးသူ ၂ ယောက်ပါ။ ကျမတို့ ငွေမလှူခင် ရောက်နေတဲ့ ကလေး၂ယောက်က ရွှေပြား၁ချပ်စာ ၅၂၀၀၀၀ လှူနေပါတယ်။ ကျမတို့က ၅၀၀၀၀ ထဲနဲ့ သားသမီးတွေရော မြေးတွေရောဆိုတော့ အများကြီးပေါ့။ သူတို့က သိန်းချီပြီး လှူမှ လက်ခံချင်တာလား မသိပါဘူး။ ကျမတို့ကို ကော်ဖီတိုက်ဖို့ဝေး စကားတောင် မပြောချင်တဲ့ပုံ။ ဧည့်ခန်းမှာတောင် သိပ်ထိုင်စေချင်ပုံမရဘူး ကျမအဖေက wheelchair နဲ့မို့သာ ဘာမှမပြောနိုင်တာ။ ပိုက်ဆံလှူတဲ့ဓါတ်ပုံလေး ရိုက်ချင်ရှာတဲ့ ကျမအဖေခမျာ ကြောင်ကြောင်လေး ထိုင်နေရပြီး နောက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ ဘုရားဖူးပြီး ပြန်လာမှ ဖြတ်ပိုင်းယူမယ်ပြောပြီး ထွက်တော့ မှ ခုနက ဂေါပက ၂ယောက်က အထဲဝင်လာပြီး ၅၂၀၀၀၀ လှူတဲ့ ကလေး၂ယောက်ကို ဘယ်မှာနေလဲ ဘာလုပ်လဲနဲ့ မျက်နှာယူနေတာကို တွေ့ရ ကြားလိုက်ရပါတယ်
အဓိက ပြောချင်တာက ပိုက်ဆံအများကြီးလှူမှ ရွှေတိဂုံဂေါပကက လက်ခံတာလားဆိုတာပါ။
ပိစိကွေးတင်ပေးမယ်နော် ဘာမှမပူနဲ့…. ခုကိုတင်လိုက်ပြီ။
လမ်းကြောင်း က ကားလမ်းမှ မဟုတ်ဘူး လေကြောင်းလမ်းလည်း ရှင်းရတယ်။
တခါ ခရီးထွက်တဲ့ နေ့ လေယာဉ် နောက်ကျတာ ၁နာရီကျော်တယ်။ လေဆိပ်ထဲ ဘယ်သူမှ ပေးမ၀င်ဘူး နောက်မှ သိတယ်။ ပြင်ဦးလွင် သွားလို့ ဆိုလားဘဲ။ လေဆိပ်ဆိုတာ စောစော ဆင်းရတဲ့ အမျိုး လေယာဉ်နောက်ကျရင် စောင့်ရပြန်ကော ဟော.. လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှာ လူတွေကပြုံ အုံနေတော့.. တန်းစီ ဟိုရောက်တော့ တခါ အဆင့်ဆင့် တန်းစီ.. နေရာတိုင်းမှာ တိုးကြိတ်အောင် တန်းစီရတယ်။ ကားတွေ ပိတ် နီးနီးနားနား သွားလို့ လေယာဉ်က ၁နာရီဘဲ ကြာရင်တောင် အနည်းဆုံး ၅နာရီ ပေးရတယ်။ စိတ်ညစ်တယ်။ အချိန်တွေလည်း အလကားပုတ်တယ်။